Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2016 | October
အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် ပြည်နယ်တိုင်းတို့တွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ စမည်
အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တွေမှာ စတင်ကျင်းပသွားမယ်လို့ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) အစည်းအဝေး က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ‘‘အားလုံးဆွေး နွေးတဲ့ရလဒ်က ဒီနေ့မှာဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုးချက်နဲ့ မှတ်တမ်းခုနစ်ချက်ကို အောင်မြင်စွာရရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို မဖြစ်မနေသွားရမယ့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကို အခုတော်တော်များများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတွက် ရှေ့ခြေလှမ်းကို တိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်’’လို့ ပြောပါတယ်။
UPDJC အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ ၂ ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု အဆင့်ဆင့် ပုံစံ(Structure)၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ၊ လူမျိုး အလိုက် ကျင်းပသော အမျိုးသား အဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ ဒေသအလိုက် ကျင်းပသော အမျိုးသား အဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ အကြောင်းအရာ အလိုက်ဆွေးနွေး သော အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ UPDJC လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ UPDJC အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်၊ UPDJC ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ အကြိမ် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ များမှာ ဆွေးနွေးမယ့် ခေါင်းစဉ်ခွဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေကို နိုဝင် ဘာလမှာ ဆောင်ရွက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ စည်းဝေးပွဲ ပထမနေ့က ပြောကြားထားပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း အန်စီအေ တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ ရှိပါတယ်။
အပစ်မရပ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အန်စီအေမှာ ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးမှ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ကြရမှာဖြစ်ပြီး အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်မှတ်ထိုးဖို့ အချိန်မဆွဲကြပါနဲ့လို့ ထုတ်ပြောထားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – ဦးလှမောင်ရွှေ
The post အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် ပြည်နယ်တိုင်းတို့တွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ စမည် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2eX9fAC http://burmese.dvb.no
အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မောင်တောတွင် ဒေသန္တရရဲအဖွဲ့ ဖွဲ့မည်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက အမှတ် ၁ နယ်ခြားစောင့်ရဲ ကွပ်ကဲမှုနယ်မြေထဲမှာ ဒေသန္တရရဲအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး တာဝန်ပေးသွားမယ်လို့ ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ်ထဲက ကျီးကန်းပြင် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် အပါအ၀င် ရဲစခန်းသုံးခု အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ဒေသခံတွေ
စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်နေကြပြီး ပြည်သူ့စစ် ဖွဲ့စည်းပြီး လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာပါ။
ဒီတောင်းဆိုမှုတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက အလေးထားစဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့ ဒေသန္တရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ့်ကျေးရွာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တဲ့ ဒေသခံ လူငယ်လူရွယ်တွေကို မွေးထုတ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ဆောင်ရွက်နေသလို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း ကျနော်တို့ကို လမ်းညွှန်မှာကြားထားပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မယ် ၃၅ နှစ်အောက်၊ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးကောင်းရင် အသက်ကို လျှော့ပေ့ါပြီးတော့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူမယ် ပြီးရင် ပညာအခြေခံ မူလတန်းအဆင့်ဆိုရင် လက်ခံပါပြီ။” လို့ ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
စစ်တွေမြို့မှာ ဒေသန္တရဲသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်သလို ကျီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်မှာပါ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ လည်း ရဲမှူးချုပ်ကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင်တန်းဆင်းပြီးတာနဲ့ လက်နက်တပ်ဆင်ပြီး ကိုယ့်ဒေသမှာပဲ တာဝန်ချထားပေးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် မောင်တောဒေသက တခြားကို တာဝန်ကျနေတဲ့ ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း သူတို့ဆန္ဒအတိုင်း တင်ပြလာရင် ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ အစီစဉ်ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒေသခံလူငယ်တွေကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိပေမယ့် ဒေသခံတွေရဲ့ စကားကို အလေးအနက်ထား ဖို့လိုတယ်လို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်သူ၊ မောင်တောမြို့ခံ မောင်ဝင်းသန်းက “ကွပ်ကဲရေးမှူးပြောသွားတာတွေက ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ပြောသွားတယ်။ ပူးပေါင်းတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒေသခံစကားကို အလေးအနက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလေးအနက်ထားပြီးတော့မှ အဲဒီ သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ တိတိကျကျ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တန့်ခိုင်မြဲရေးကို တိတိကျကျ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ ကျေးရွာလုံခြုံရေး၊ လမ်းတလျှောက် လုံခြုံရေး၊ မောင်တောနယ်မြေကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၉ ရက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး ကျဆုံးခဲ့ရပြီး လက်နက်မျိုးစုံ ၆၀ ကျော်လည်း လုယက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ထိ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေသူ ဦးရေငါးဆယ်ခန့်ရှိပြီး သေနတ်မျိုးစုံ ၁၈ လက်နဲ့ ကျည်ဆန် သုံးထောင်ကျော်ကို ပြန်လည်ရရှိထားတယ်လို့ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့က သိရပါတယ်။
The post အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မောင်တောတွင် ဒေသန္တရရဲအဖွဲ့ ဖွဲ့မည် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2f2HIew http://burmese.dvb.no
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် ဂျပန်သွားမည်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေးရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှာ ဂျပန်ကို ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက် မယ်လို့ အစိုးရက တရားဝင်သတင်းထုတ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၅ ရက်ကြာ ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးအပြင် အခြား တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးတို့ဟာ လာအိုနိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအတွင်း သီခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြဖူးပြီး ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာ ဂျပန်က အပြည့်အ၀ ထောက်ခံကူညီသွား မယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
The post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် ဂျပန်သွားမည် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2f1CQGH http://burmese.dvb.no
အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ သုံးမျိုးလုပ်ချင်ဟု ဒေါ်စုပြော
လာမယ့်လထဲမှာ စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ သုံးမျိုး လုပ်ချင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ UPDJC အစည်းဝေးမှာ အခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပြီး အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ စမ်းသပ်အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
“စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲတွေကို သုံးခုလောက်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဘာလည်းဆိုတော့ ဒေသကိုအခြေခံတာ တမျိုး၊ အမျိုးသားအဆင့်ကို အခြေခံတာ တမျိုး၊ ရိုးရားကို အခြေခံတာ တမျိုး ဒီသုံးမျိုးပေါ့။ ဒီသုံးမျိုးကို ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး လာမယ့်နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဖြစ်နိုင်အောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကြည့်ပြီးတော့မှ ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေ ရှိတယ်၊ အခက်အခဲတွေရှိတယ်၊ ပိုပြီး ပီပြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလည်းဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
The post အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ သုံးမျိုးလုပ်ချင်ဟု ဒေါ်စုပြော appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2e4VrTb http://burmese.dvb.no
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Civil Wars, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2eZwt5v http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Civil Wars, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် တပ်အင်အား အပြိုင်အဆိုင် တိုးချဲ့ချနေ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာ မြန်မာတပ်မတော်က ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေ ရှိနေသလို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကလည်း အင်အား တိုးချဲ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (LNDO) က ထုတ်ပြန်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပင်း၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းတုံ၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဖြတ်၊ တာချီလိတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ မိုင်းလား စတဲ့ မြို့နယ် ၈ ခုမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ပြည်သူ့စစ်အပါအ၀င် အစိုးရတပ်အင်အား ၁o,၇၀၀ ကျော် ရှိရာကနေ အခု ၁၄,၀၀၀ တိုးလာတယ်လို့ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ၆၈ ဖွဲ့အင်အား၂၃၀၀ လောက်ရှိပေမယ့် အခုအခါ ၈၇ ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီး အင်အား ၃၄၀၀ လောက် ရှိလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
အစိုးရတပ်တွေ အင်အားတိုးလာသလိုပဲ တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်တဲ့ UWSA၊ RCSS/SSA နဲ့ NDAA (မိုင်းလား) တို့ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က အင်အား အနည်းငယ်ကနေ အသီးသီးတိုးလာခဲ့ကြတယ်လို့လည်း “မူးယစ်ဆေးမှအာဏာ”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြတယ်။
အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဂျာဖက်ဂျာကွီးက “ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ၈ မြို့နယ်မှာ သွားမေးကြည့်တယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး တိကျအောင် ကြိုးစားကြည့်တယ်။ စစ်တပ်က တိုးချဲ့သလို သူရဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဘက် ၀ကလည်း တပ်တိုးတယ်။ ဥပမာ တောင်ပိုင်းဝက တချိန်တုန်းက ၃၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ ရှိတယ်။ အခုဟာက ၄၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ အဓိကအရမ်းတိုးလိုက်တာက အစိုးရနဲ့ RCSS လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အခါ နယ်ခြားဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတော့ အဲဒီ မိုင်းလားမှာ ၀က အဲဒီနေမှာ အင် ၁၀၀၀ လောက်တိုးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး မိုင်းလားအဖွဲ့က ၁၀ နှစ်ဟိုဘက်ပိုင်းမှာ အင်အား ၁၀၀၀ကျော်ပဲရှိတယ်။ အခုက ၅၀၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ ခန်းမှန်းမိတာပေါ့နော်။ ”လို့ပြောပါတယ်။
ပြည်သူစစ်တွေ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာ ပြည်သူ့ စစ်တွေက ဘိန်းစိုက်တောင်သူအပေါ်မှာ ကောက်ခွန်တွေ ကောက်သလို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့တွေကလည်း အကောက်ခွန်ေ ကာက်တာတွေရှိတယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်မှုတွေကို အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဘိန်းစိုက် တောင်သူတွေရဲ့ ဘ၀က ဆင်းရဲမွဲတေမြဲဖြစ်တယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်။
အစိုးရသစ်အနေနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးပြသနာကို အမှန်အတိုင်းမြင်ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ မူးယစ်ဆေးပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပဋိပက္ခကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဦးစားပေးဖြေရှင်းဖို့လည်း လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ကတိုက်တွန်းထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုး ဟတ်တာပေါင်း ၅၅၅၀၀ ရှိတဲ့အနက် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းမှာ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း စိုက်ပျိုးတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
The post ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် တပ်အင်အား အပြိုင်အဆိုင် တိုးချဲ့ချနေ appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2ePe6DW http://burmese.dvb.no
RCSS နှင့် တပ်မတော်ကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ရေး ပဋိပက္ခ အပေါ် စုံစမ်းဖော်ထုတ်မည်
ချင်းမိုင်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ။ ။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကေင်စီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(RCSS/SSA) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ရေးပဋိပက္ခကို စုံစမ်းစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း RCSS မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်ငင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ စိစစ် အတည်ပြုရေးအဖွဲ့သည် လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်ထိ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တုံလောကျေးရွာအုပ်စု ပန်ပွိုင်ကျေးရွာရှိ ဒေသခံများ၊ မျက်မြင်သက်သေများ၊ RCSS ဘက်မှ တပ်မှူးများကို သွားရောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုဗိုလ်မှူး ကြီး စိုင်ငင်းက ပြောသည်။
“၂၆ ရက်၊ ၂၇ ရက်မှာ ရန်ကုန် NRPC မှာ သူတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ တုံလောအုပ်စု ပန်ပွိုင်ကျေးရွာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့ အတည်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စုံစမ်းမေး မြန်း တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ကျနော်တို့ တပ်မှူးတွေရော တွေ့ဆုံမေးမြန်းမယ်။ ရွာသားတွေရော၊ တခြားမျက် မြင်သက်သေတွေ အားလုံးကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီးတော့ အစီရင်ခံစာ ပြန်ရေးမယ်” ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
၄င်းအဖွဲ့က ကွင်းဆင်းလေ့လာ၍ ရရှိလာသော အစီရင်ခံစာကို JMC-U ပြန်လည် တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော် မတီ(JMC-U)မှ ယင်းကိစ္စအပေါ် စိစစ်ရန်အတွက် စိစစ်အတည်ပြုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို အရပ်သားကိုယ်စားလျှယ် ၂ ဦး၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် (သို့မဟုတ်) တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး စုစုပေါင်း ၆ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်ငြိမ်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် အရပ်သား ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းမျိုးသန့်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်(EAO)မှ RCSS မှ ဗိုလ်မှူးစိုင်းဦး၊ ရဲ ဘော် ဆလိုင်းယောအောင်၊ အစိုးရ သို့မဟုတ် တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဝဏ္ဏအောင်၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး လင်းထင်ကျော်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လွယ်လင်ခရိုင် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တုံလောကျေးရွာအုပ်စု ပန်ပွိုင်းကျေးရွာရှိ RCSS ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး စခန်းသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် ခဲ့သဖြင့် အောက်တို ဘာလ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ပွားမှုကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးစာချုပ်(NCA)ကို တပ်မတော်မှ ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အစိုးရဘက်မှ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ(JMC-U)နှင့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် အဆင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-S) တို့နှင့် အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းရန် RCSS ဘက်မှ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/2ePb7Ly http://ift.tt/1nfHMox
Posted in Burmese Military - တပ်မတော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Military	| Leaveacomment |
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2dTPllD http://www.rfa.org